Taageerayaasha Man Utd oo Martial ula baxay naaneys cusub | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Taageerayaasha Man Utd oo Martial ula baxay naaneys cusub
Taageerayaasha Man Utd oo Martial ula baxay naaneys cusub
Posted by: Ahmed Haaddi December 9, 2018
Himilo FM – Anthony Martial ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigay Manchester United dhawaan. Ciyaaryahanka reer France ayaa haatan dhaliyay 7 gool 11-kii kulan ee ugu danbeysay ee uu u safto kooxda.
Goolkii uu ka dhaliyay Arsenal dhammaadka toddobaadkii lasoo dhaafay waxay ka dhigneyd goolkii siddeedaad xilli ciyaareedkan,taageerayaasha ayaana rajeynayay in uu qeyb ka noqon doono kulanka Fulham ee sabtida.
Si kastaba ,dhaawac ayuu kaga maqnaa kulankii ay 4-1 kaga badiyeen Cottagers, taageerayaasha ayaana haatan sugaya inay arkaan haddii uu taam u noqon doono safarka Liverpool.
Martial ayaa daawaday United kulankii ay Fulham guusha kaga gaartay Old Trafford iyadoo Ashley Young, Juan Mata, Romelu Lukaku iyo Marcus Rashford ay shabaqa soo taabteen.
23 jirkaan ayaa Twitter-kiisa fariin ugu diray Juan Mata,fariin u qorneyd ‘El Mago’ oo ay micnaheedu tahay (saaxirka),iyadoo ay taageerayaal fara badan ay ka aragti dhiibteen, waxayna inta badan qoraaladooda u summadeysanaayeen “Ronaldaha France”.
Taageere lagu magaacaabo kQ oo Twitter-ka kusoo gala @karimque ayaa u qoray fariintiisa sida tan “French Ronaldo”
Mid kale oo lagu magacaabo Tanmay ayaa ku jawaabay isaga oo yiri “Le French Ronaldo”
Previous: Hindiya: 1 milyan oo qofood ayaa u dhinta wasaqda hawada sannad kasta
Next: 10 December- Maalinta Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha